ကျင်ငယ်ရေ လူရဲ. မျက်နှာကို ပိုမိုလှပနုပျိုစေနိုင်ဟု ပညာရှင်များဆို | Buzzy
ကျင်ငယ်ရေ လူရဲ. မျက်နှာကို ပိုမိုလှပနုပျိုစေနိုင်ဟု ပညာရှင်များဆို
အလှအပနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေက ဆိုတာပါ
ဗြိတိန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး သတင်းစာတစ်စောင်က မိမိရဲ. ကျင်ငယ်ရေနဲ့ မျက်နှာကို သုတ်လိမ်းပေးခြင်းဟာ အခြားပေါင်းတင်ပစ္စည်းတွေထက် များစွာပိုပြီး ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အရေပြား ပညာရှင်အချို.ကလည်း ကျင်ငယ်ရေဟာ အရေပြားအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ သဘာဝဆေးလို့ ယုံကြည် လက်ခံထားပါတယ်။
ဗွိတိနျနိုငျငံက နာမညျကွီး သတငျးစာတဈစောငျက မိမိရဲ. ကငျြငယျရနေဲ့ မကျြနှာကို သုတျလိမျးပေးခွငျးဟာ အခွားပေါငျးတငျပစ်စညျးတှထေကျ မြားစှာပိုပွီး ထိရောကျတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။ အရပွေား ပညာရှငျအခြို.ကလညျး ကငျြငယျရဟော အရပွေားအတှကျ အထူးသငျ့တျောတဲ့ သဘာဝဆေးလို့ ယုံကွညျ လကျခံထားပါတယျ။
ကျင်ငယ်ရည်နဲ့ မျက်နှာလိမ်းခြင်းဟာ ဟိုးယခင် ဂရိ ၊ အီဂျစ် ၊ ရိုမန်အင်ပါယာခေတ်တွေကတည်းက ခေတ်စားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကျင်ငယ်ရေနဲ့ မျက်နှာသန်စင်တဲ့ ဓလေ့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ လူမသိသူမသိ ကိုယ့်အိမ်မှာတင် လုပ်လို့ရနိုင်ပြီး မျက်နှာသစ်ဖို့အတွက်လည်း ကျင်ငယ်ရေ အနည်းငယ်သာ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကငျြငယျရညျနဲ့ မကျြနှာလိမျးခွငျးဟာ ဟိုးယခငျ ဂရိ ၊ အီဂဈြ ၊ ရိုမနျအငျပါယာခတျေတှကေတညျးက ခတျေစားခဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ ကငျြငယျရနေဲ့ မကျြနှာသနျစငျတဲ့ ဓလေ့ ရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးဟာ လူမသိသူမသိ ကိုယျ့အိမျမှာတငျ လုပျလို့ရနိုငျပွီး မကျြနှာသဈဖို့အတှကျလညျး ကငျြငယျရေ အနညျးငယျသာ လိုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကျင်ငယ်ရေကို ရေနဲ့ မျက်နှာသစ်သလို သုံးစရာမလိုပဲ တို့ပတ်စ သို့တည်းမဟုတ် ဝါဂွမ်း ၊ အဝတ်တို့နဲ့ တို့စွတ်ပြီး မျက်နှာပေါ် တို့ပေးရုံနဲ့ သိသိသာသာ စွမ်းဆောင်မှု ပေးနိုင်မှာပါ ။ ကျင်ငယ်ရေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကလည်း မျက်နှာပြင် အရေပြားပေါ်က အညိုအမည်း အနီဖုများ ၊ နှင်းခူလို အရေးပြားရောဂါများ ဝက်ခြံတင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် စတာတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကငျြငယျရကေို ရနေဲ့ မကျြနှာသဈသလို သုံးစရာမလိုပဲ တို့ပတျစ သို့တညျးမဟုတျ ဝါဂှမျး ၊ အဝတျတို့နဲ့ တို့စှတျပွီး မကျြနှာပျေါ တို့ပေးရုံနဲ့ သိသိသာသာ စှမျးဆောငျမှု ပေးနိုငျမှာပါ ။ ကငျြငယျရထေဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဓါတျပစ်စညျးတှကေလညျး မကျြနှာပွငျ အရပွေားပျေါက အညိုအမညျး အနီဖုမြား ၊ နှငျးခူလို အရေးပွားရောဂါမြား ဝကျခွံတငျးတိပျ မှဲ့ခွောကျ စတာတှကေိုလညျး ပြောကျကငျးစနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပညာရှင်အချို.ကတော့ ကျင်ငယ်ရေနဲ့ မျက်နှာသစ်တာကို အားမပေးကြပါဘူး ၊ ကျင်ငယ်ရေဟာ အသားအရေ လှပစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို မငြင်းပေမယ့် ကျင်ငယ်ရေကို လူတွေက ရွံစရာ မသတီစရာလို့ လက်ခံထားတာမို့ ဒီလိုအရာကို မျက်နှာပေါ် တင်မယ့်အစား အခြားသော ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ အသားအရေ လိမ်းဆေးတွေကို သာ အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းထားတာပါ။
ပညာရှငျအခြို.ကတော့ ကငျြငယျရနေဲ့ မကျြနှာသဈတာကို အားမပေးကွပါဘူး ၊ ကငျြငယျရဟော အသားအရေ လှပစနေိုငျတယျဆိုတာကို မငွငျးပမေယျ့ ကငျြငယျရကေို လူတှကေ ရှံစရာ မသတီစရာလို့ လကျခံထားတာမို့ ဒီလိုအရာကို မကျြနှာပျေါ တငျမယျ့အစား အခွားသော ထိရောကျကောငျးမှနျတဲ့ အသားအရေ လိမျးဆေးတှကေို သာ အသုံးပွုဖို့ တိုကျတှနျးထားတာပါ။